सुशील र बर्षाको ‘कारखाना’मा मौसमीको इन्ट्री (ट्रेलर) | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - May 8, 2017
सुशील र बर्षाको ‘कारखाना’मा मौसमीको इन्ट्री (ट्रेलर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । असार १६ लाई रिलिज मिती तय गरेको फिल्म ‘कारखाना’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । ट्रेलरमा रोमान्स, एक्सन र पिडाका दृश्य चित्रित छन् । काठमाडौं आयोजित एक प्रेसमिटका बीच फिल्मको बारेमा जानकारी दिदै फिल्मको ट्रेलर र गीत देखाइयो । ट्रेलरमा लामो समयको अन्तराल पछी अभिनेत्री मौसमी मल्लको आगमन भएको छ ।
‘कारखाना’को बारेमा बोल्दै निर्देशक अमरदीप सापकोटाले फिल्मको टाइटल सुन्दा कुनै उद्द्योग धन्दाको बारेमा स्मरण हुने हुदा, सबैलाई ‘कारखाना’को अर्थ उद्योग धन्दा नबुझ्न आग्रह गरे । फिल्म भित्र ‘कारखाना’को अर्थ भिन्न रहेको र उक्त सस्पेन्स थाहा पाउन हलसम्मै जानु पर्ने बताए । ‘कारखाना’को कथनिय अर्थ भिन्न बताए पनि निर्देशकले फिल्मको बारेमा त्यति खुलेर बोलेनन् ।
दयाराम दाहाल, सुशील पोखरेल र निर्देशक स्वयमको पटकथामा निर्मित फिल्ममा वर्षा सिवाकोटी, सुशील श्रेष्ठ, मौसमी मल्ल, जेविका कार्की, नविन लम्साल, विकाश उप्रेती लगायतका कलाकारको अभिनय छ । फिल्म सुदिप खड्का र अमर बज्राचार्यको लगानीमा बनेको हो ।
Tags:barsha siwakoti, mausami malla, sushil shresths
सुशील र बर्षाको ‘कारखाना’मा मौसमीको इन्ट्री (ट्रेलर)0out of5based on0ratings.0user reviews.
स्कटिस तालमा ‘प्रेमगीत २’को ‘मोटरसाइकल’ (भिडियो)
कस्तो माया हो यो ?, छुल्ठिम र सन्नीको (भिडियो)
Nepal	Feb 10, 2018
द सिनेमा टाइम्स काठमाण्डौ – सिनेमा ‘रानीमहल’बाट अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीले हात झिकेकी छन् । साइन गरेको…
songs	Dec 27, 2017
श्रीधरको निर्देशनमा पुष्पल र वर्षाको रोमान्स ! (भिडियो)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – अभिनेता पुष्पल खड्का र अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी अभिनित फिचर्ड म्युजिक…
Events	Dec 12, 2017
Exclusive: ‘भैरे’ सुटिङमा यसरी हुँदैछ मस्ती ! (१० तस्विर)
सिपी जैसी, काठमाडौँ – मंसीर ५ गते देखि अपर मुस्ताङबाट छाँयाकन सुरु भएको सिनेमा ‘भैरे’को…